‘एल क्लासिको’ आज, कसले मार्ला बाजी? | Hamro Khelkud
‘एल क्लासिको’ आज, कसले मार्ला बाजी?
म्याड्रिड (एजेन्सी) – स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत सिजनको अन्तिम ‘एल क्लासिको’ भिडन्त रियल म्याड्रिडको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नबेउमा हुदैछ ।
खेल नेपाली समयानुसार आइतबार राती १२ः३० बजेपछि हुनेछ । स्पेनिस ला लिगामा एक खेल कम खेलेको रियल बार्सिलोनाभन्दा तीन अंकले अघि छ । यस्तोमा घरेलु मैदानमा हुने ‘एल क्लासिको’ जित्न सके रियलले आफ्नो उपाधि यात्रालाई थप मजबुत बनाउनेछ । ला लिगामा पाँच चरणका खेल बाँकी रहँदा आइतबार राति हुने ‘एल क्लासिको’ले नै उपाधिको छिनोफानो गर्नेछ । लिगमा ३२ चरणको खेल सकिदा रियलको ७५ तथा बार्सिलोनाको ७२ अंक छ ।
च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बायर्न म्युनिखविरुद्धको पहिलो लेगमा घाइते भएर दुई खेल गुमाएका स्टार ग्यारेथ बेलले बार्सिलोनाविरुद्धको खेलबाट मैदान फर्कने पक्का भएको छ । यसले रियलको अग्रपंक्ति थप मजवुत हुनेछ । यस्तै रियललाई च्याम्पियन्स लिगको १ सय गोल पुरा गरेका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिष्टियानो रोनाल्डो, करिम बेन्जेमा र स्पोर्टिङ गिजोनविरुद्ध सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेका इस्कोको साथ रहनेछ । रियल म्याड्रिडमा जिनेदिन जिदान प्रशिक्षक भएयता रियलले एल क्लासिको गुमाएको छैन । जिदानको प्रशिक्षणमा सन् २०१६ अप्रिलमा रियलले २–१ को जित निकालेको थियो । यस्तै डिसेम्बरमा एक–एक गोलको बराबरी खेलेको थियो ।
रियलको घरेलु मैदानमा हुने यस सिजनको अन्तिम एल क्लासिको गुमाए क्याटलान जाएन्ट बार्सिलोनाको स्पेनिस ला लिगाको उपाधि यात्रा निकै कमजोर बन्ने छ । खेल गुमाए बार्सिलोना रियलभन्दा ६ अंकले पछि पर्नेछ । जुन उपाधिभन्दा निकै टाढा हुनेछ । च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरिएको बार्सिलोनासँग रियलसँग पनि पराजित भए एकमात्र उपाधि हातमा हुनेछ । बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे उपाधि नजिक छ । बार्सिलोना बिहिबार युभेन्टससँग दोस्रो लेगमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएपनि समग्रमा ३–० को हार बेहोर्दै च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलबाटै बाहिरिएको थियो।
बार्सिलोनाले एल क्लासिकोका पछिल्लो ६ मध्ये २ खेल गुमाएको छ । आइतबार पनि रियलमाथि बार्सिलोना नै हावी हुने देखिन्छ । तर, रियलमा जिनेदिन जिदान प्रशिक्षक भएर आएपछि बार्सिलोनाले रियललाई पराजित गर्न सकेको छैन । यस्तोमा ब्रजिली स्टार नेयमार पनि टिममा नहुँदा बार्सिलोेनालाई समस्या हुन सक्नेछ । मालगाविरुद्धको खेलका क्रममा रेफ्रीलाई व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले ताली दिएपछि उनलाई चार खेलमा प्रतिबन्ध सुनाइएको थियो । बार्सिलोनाले नेयमारविरुद्धको प्रतिबन्धमाथि कोर्ट अफ आर्बिटेसनमा अपिल गरेपनि अपिल खारेज भएको थियो । गत डिसेम्बरमा बार्सिलोनाको घरेलु मैदान नोउ क्याम्पमा भएको एल क्लासिको एक–एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । लुईस स्वारेजले बार्सिलोनालाई दिलाएको अग्रतालाई रियलका कप्तान सर्जियो रामोसले इन्जुरी समयमा गोल गर्दै सम्भावित हार टारेका थिए ।
एल क्लासिकोको सर्वाधिक गोलकर्ताको सुचीमा बार्सिलोनाका लियोनेल मेस्सी रहेका छन् । उनले २१ गोल गरेका छन् । रियलका पूर्व खेलाडी अल्फ्रेडो डि स्टेफानो १८ गोलसहित दोश्रो तथा रियलकै क्रिस्टियानो रोनाल्डो १६ गोलसहित तेस्रो स्थानमा छन्।